कोभिड-१९ अपडेट : इटालीमा मृत्युदर बढ्दो, कहाँको अवस्था कस्तो ? - 761खबर.com
कोभिड-१९ अपडेट : इटालीमा मृत्युदर बढ्दो, कहाँको अवस्था कस्तो ?
चैत ०९, रोम - नोबेल कोरोना भाइरस कोभिड–१९ बाट मर्नेको दर इटालीमा दिनदिनै बढिरहेको छ । शनिबारसम्म इटालीमा यस भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ४८२५ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा इटालीमा मात्रै थप ७९३ जनाले ज्यान गुमाएको समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ । शनिबार मात्रै इटालीमा ६५५७ जना थप संक्रमित भेटिएको चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाले खबर दिएको छ । सिन्ह्वाका अनुसार इटालीमा संक्रमितको संख्या ५३ हजार ५७८ पुगेको छ। सो मध्ये कबिर ६ हजार जना निको भएका छन् ।
इटालीपछि धेरै प्रभावित देशको आँकडा
चीन . मृत्यु : ३२६०, संक्रमित : ८१,३२१ निको : ७१,८६२ इरान . मृत्यु : १५५६, संक्रमित : २०६१०, निको : ७६३५ स्पेन . मृत्यु : १३७५, संक्रमित : २५,३७४, निको : २१२५ फ्रान्स . मृत्यु : ५६२, संक्रमित : १४३०८, निको : १२ अमेरिका . मृत्यु : ३०५, संक्रमित : २५,४९३, निको : १७१ छिकेकी मुलुक भारत मृत्यु : ४, संक्रमित : ३३० निको : २३ स्रोत अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरु, आजको अन्नपूर्ण दैनिकमा खबर रहेको छ ।